Mey 11, 2018 Admin
Bank of Kanada ny mampiasa blockchain ho fandaminana avy hatrany Fiarovana
The farany “Project Jasper” blockchain fitsapana dia nampiseho fa ireo nizara boky firaketana automating Fiarovana mahomby amin'ny keliny in real-time, araka ny Bank of Kanada sy ny mpiara-miasa teo amin'ny roa “Integrated Fiarovana sy ny fandoavam-bola ponenana” tetikasa.
Gerry Gaetz, filoha sy ny Tale Jeneralin'ny vola Kanada, dia voalaza ho niteny:
“Izany dia mampiseho fa azo atao mba hanafaka vola amin 'ny fomba izay tsy mbola nataony teo aloha – amin'ny alalan'ny vola swapping mivantana avy amin'ny mpividy ny mpivarotra, miteraka tampoka tanàna.”
Koreana fifanakalozana Upbit bemidina ny mpampanoa lalàna
Mpampanoa lalàna ao Korea Atsimo no voalaza fa nanafika ny cryptocurrency lehibe indrindra ao amin'ny firenena fifanakalozan, UPbit. Naman'ny Fiangonana avy amin'ny mpampanoa lalàna’ biraon'ny Seoul nikaroka ny lohany biraon'ny ny fifanakalozana eo amin'ny faha-10 May.
UPbit dia ahiana ny hosoka ho an'ny voalaza fa nivarotra cryptocurrency ny mpanjifa fa tsy tena mihazona, araka ny tatitra.
ny mpampanoa lalàna’ Hoy ny biraon'ny: “Efa antoka mafy disks sy ny boky amin'ny alalan'ny fitànana kaonty. Analysis Antenaina haka andro.”
Huawei dia ahitana ny kitapom-batsy Bitcoin rindrambaiko amin'ny App Store
Ireo mpampiasa ny finday Huawei dia ho afaka télécharger Bitcoin mpanjifany eo amin'ny fitaovana voalohany manomboka Zoma.
Huawei, izao tontolo izao lehibe indrindra ny fahatelo-handset mpanao, no hanafahana ny Bitcoin BTC.com kitapom-batsy amin'ny AppGallery, ARAKA ny Alejandro de la Torre, BTC.com ny filoha lefitry ny asa fandraharahana.
Ary hoy izy: ny AppGallery dia mialoha nametraka rehetra Huawei vaovao finday.
Ny hetsika dia mety hanana fiantraikany indrindra ao amin'ny tsena Shinoa, izay Huawei no lehibe indrindra mpivarotra finday. Ny governemanta Shinoa Android vato ny Google Play Store sy sasany ny fizarana ny Apple iTunes, mametra ny fidirana ny fampiharana toy ny BTC.com ny. Raha Shina no nakatona cryptocurrency sehatra varotra, ny olona mbola afaka manana virtoaly vola.
"Tena tsara tap fahafahana ho any amin'ny tsena Shinoa,"De la Torre nanao tafatafa tao amin'ny telefaonina. "Ny fampiasana vola amin'ny fampiharana cashless dia tena lehibe sy ny rafitra nentim-paharazana banky tsy ampy, ka misy raharaha mampiasa tsara ny crypto fandoavam-bola ny mitombo any. "
Ny mpamorona ny ...
Solontenan'ny faha ...
Ny governoran'i Tenn ...
Previous Post:Varotra bots for Cryptotrading
Next Post:Crypto Tanora